Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana : Mamadika palitao ireo jiolahim-pôlitika
Fifidianana : Mamadika palitao ireo jiolahim-pôlitika
Tena efa tsy mahalala menatra intsony ny olona milaza azy fa mpanao pôlitika amin’izao fotoana izao. Fihetsika mamoafady sy manala baraka tanteraka no hita amin’ireo olom-boafidy sy ny olom-boatendry izay novolavolain’ny fanjakana tato ho ato. Tsy misy intsony amin’izy ireo izany henatra ny ho afa-baraka na koa ny fatahorana vavam-bahoaka izany fa efa manao izay hihinanana fotsiny sisa.
Amin’izao isika miteny izao dia navadika avokoa ny palitaon’ireo olona nanompo ny fanjakana teo aloha. Rehefa avy nihoby ny fanjakana teo aloha izy ireo, dia mahita indray amin’izao fotoana izao fa ratsy hono iny fanjakana iny ka aleo hivadika indray. Niara-nisaosy sy nihinana ary nangalatra sy nanodinkodina fananam-bahoaka sy volam-panjakana tao daholo izy rehetra tamin’izany fotoana izany. Iza koa no tsy nahalala ny antsoina hoe “malette” na ilay fanaovana kolikoly avolenta tamin’ny fividianana ny tombotsoam-bahoaka ka natakalo ny tombotsoan-tsamirery nataon’ny olom-boafidy sy ny minisitra ary ny praiminisitra sasany teo aloha iny. Minisitra maromaro avy amin’ny governemanta nisy tamin’ny fitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina no nivadika taminy rehefa tsy voatendry ho minisitra intsony. Hatramin’ny praiminisitra izay niray petsapetsa tamin’io fanjakana io aza dia namadika palitao avokoa amin’izao fotoana izao ka noharatsiana sy noesoesoana ireo namany teo aloha ireo. Ny fitsarana ny fampiasana ny volam-panjakana na ny “Cour des comptes” dia mbola nanamarina izany tamin’ny fitsarana nataony ny fampiasana ny teti-bolam-panjakana ny taona 2016 sy 2017 lasa teo iny. Voakiana mafy ny ministera sy ny vondrom-bahoaka isan’ambaratongany maro eto Madagasikara satria nahitana fitantanam-bola mampiahiahy sy tsy manaraka ny tokony ho izy. Misy mihitsy aza no efa voamarina fa fanodinkodinana volam-bahoaka no nataon’ireo mpitondra ireo.
Noheverin’ireo namany nivadika ireo fa maloto ny fanjakan’ingahy Hery Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao, nefa izy ireo no nampaloto azy sy niray tsikombakomba tamin’ny ratsy rehetra nisy tamin’izany.
Ankehitriny ary dia nivadika indray ireto mpanao pôlitika maloto ireto. Mamory mpanao gazety na manao valan-dresaka koa amin’ny haino aman-jery isan-karazany. Mampiasa izao ohabolana tsara rindra sy nitazona ny soatoavina sy ny fahendrena Malagasy izao izy rehetra. Dia toa ireny anjely latsaka an-tany ireny fa tsy misy madio sy misaina noho izy eto amin’ity firenena ity. Aiza ve ka depiote sy senatera tsy nahalalala raha tsy ny nanao aferafera nandritra ny fotoana niasany no milaza azy fa mendrika indray ary mahalala ny zavatra tsara teto amin’ity firenena ity?
Amin’izao fotoana izao dia namonjy ny antoko malazalaza indray ary milaza fa manohana tsy misy fepetra io antoko sy kandidà io. Ny sasany aza dia milaza fa nisolo ny vahoaka avy amin’ny toerana nahalany azy hono. Dia tena mampalahelo ny toe-tsaina mirefarefa toa izao. Tsy misy fitiavan-tanindrazana na hanasoa firenena sy ny vahoaka mifidy azy.
Koa satria te hahazo vato ny mpifidy koa ilay kandidà hatonin’izy ireo dia mandray azy soa aman-tsara ary mankasitraka koa. Tsy miraharaha izay tombotsoa ambonin’ny firenena fa baikon’ny fitiavana handresy ihany ka lasa tsy afaka nisaina intsony.
Mbola ireny olona ireny ve no hitondra ny firenena ity rahampitso? Olona nalaza nangalatra, mpanodinkodina volam-bahoaka, namitaka ny vahoaka nifidy azy amin’ny fivadibadihana etsy sy eroa noho ny fitiavam-bola be loatra. Izany no môdelin’ny mpanao pôlitika Malagasy ankehitriny. Manararaotra ny fahantrana misy amin’ny vahoaka 95% ny Malagasy izy ireo. Aiza ve ka dia vidiana amin’ny vola 500 ariary izy ireny amin’izao fifidianana izao , dia asaina mihinjakinjaka sy mikiakiaka ary milahatra eran’ny tanàna. Tonga hatrany amin’ny famporisihana sy ny fampihantsiana koa aza izy ireny ankehitriny. Samia mandinika tsara fa ny firenena tsy tokony ho lalaovina toa izao.